खासमा यस्तो हुन्छ ओराली लागेको हरिणको चाल ! « Gajureal
खासमा यस्तो हुन्छ ओराली लागेको हरिणको चाल !
प्रकाशित मिति: ९ आश्विन २०७६, बिहीबार ०९:४५
असोज ८ गतेको अन्नपुर्ण पोस्टका अनुसार, नेपाल एयरलाईन्स बेथितिमा चलेको देखिन्छ । ब्यबस्थापन चुस्त नहुनु, नीति र कार्यन्वयन दुरुस्त नहुनु, हवाइजहाज स्वस्थ नहुनु नै बेथिति हो । जहाज १४ वटा तर उड्नेचाहीं ६ वटामात्र ! बाँकी सबै सुतेर बस्छन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निगम दिवसको अवसरमा ग्राउण्ड्भरी जहाज देखेपछि प्रश्न उठाए- ‘जहाज किनेर लडाउन ल्याएको कि सडाउन ल्याएको ?’ जहाज दुहेर खान पल्केका बड्काहरु नाजवाफ भए रे । जागिर खानमात्र गएका छोट्काहरुले ताली बजाए रे ।
शीर निहुर्याएर लाज पचाउने र ताली बजाएर इज्जत बंचाउने बाहेक नेपाल एयरलाईन्सको समृद्धिको सपना सजाउनेहरु पनि धेरै छन् । प्रधानमंत्रीले सोधेको ‘जहाज सुताउने कि ठाँउ ओगट्नमात्र किन्या हो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।
नेपाल एयरलाइन्सका जहाज यात्रुको लागि सेवा र राज्यका मेवाका लागि मात्र ल्याइन्दो रहेनछ । यात्रुलाई उडाउन मात्र होइन, कर्मचारीको भुँडी बढाउँन पनि किनिँदो रहेछ । कम्पनी फुलाउन फलाउन मात्र होइन, पार्टीहरु चलाउन पनि जहाज ल्याइदो रहेछ ।
नेतालाई कोटामा जहाज चढ्न र भाई भतिजालाई भर्ना गर्न पनि जहाज ल्याईन्छ । निर्यात भन्दा आयात भर्न र कमिसन आर्जन गर्न पनि जहाज किनिदो रहेछ । यहाँ लाउडाको चर्चा नआएको हैन र पार्टीले पैसा नखाएको हैन । मुद्धा उठाएको हो, ढाकछोप गरेर लुकाएकै हो । चेज एयर चर्चा नचाल्या होइना, बिपक्षी नेता पनि नबोल्या होइन । तैपनि कारबाही कहिल्यै भएन, कोही पनि यहाँ चोखो रहेन ।
नेपाल एयरलाईन्सलाई राम राम भन्ने धेरै नेता आए तर काँध थाप्ने कोहीपनि आएनन । जो आउँछ, वाइडबडीजस्तै थला पर्छ । बुझ्नोस है, जहाज उड्न र उडाउन होईन, लड्न र लडाउन ल्याइन्दो रहेछ क्या !
दाँत कोट्याउने सिन्का बिदेशबाट, दाँत झार्ने मुक्कामा आत्मनिर्भर बन्दै देश !
फोहोर उठाउने जिम्मा लिएको कम्पनीले सडकमै फाल्यो फोहोरकम्पनीले भन्यो – ‘फोहोर उठाउने जिम्मा मात्र लिएको
‘असारे विकास’मा एकैदिन ११ अर्ब भुक्तानी, ‘वैदेशिक शिक्षा’कालागि बाहिरियो ३ खर्बदेश चाँडै श्रीलंकाको बाटोमा पुग्नेमा ठेकेदारहरु आशावादी !
पानी पर्दा देशभरका सरकारी वेबसाइट आध‍ा घण्टा डाउनपानी पारेको भनेर विदेशी कुटनीतिक चलखेलमाथि आरोप !
उही पुरानो वामदेव बाजेको नयाँ पेडा पसल !
अध्ययन भन्छ : आम जनताभन्दा धेरै बाँच्छन् नेताहरुअध्ययनका अनुसार आम जनताभन्दा धेरै बुढा पनि रहन्छन्
नेकपा (एस)पछि जसपा (त्यस)ले मन्त्री फेर्ने, मन्त्री परिषद हो कि खेलकुद परिषद ?!
रामचन्द्र पौडेलको प्रश्न – ‘रामकुमारी झाक्रीलाई रूवाएर समाजवाद आउँछ?’जनतै रुवाए पनि समाजबाद ल्याउन सकिन्न हाम्रो
अहो, उर्जामन्त्री ! क्या हो अर्थमन्त्री ?
दाँत कोट्याउने सिन्का बिदेशबाट, दाँत झार्ने मुक्कामा आत्मनिर्भर बन्दै देश…
‘असारे विकास’मा एकैदिन ११ अर्ब भुक्तानी, ‘वैदेशिक शिक्षा’कालागि बाहिरियो ३…
उल्का, अचम्म, अद्भुत, छक्क, ट्वाल्ल, सिरिङ्ग, झसङ्ग, ट्वाँ, सरप्राईज, सक्ड,…